🥇 Ubalo-mali lokuhanjiswa kokutya
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 943
Ividiyo ye-accounting yokuhanjiswa kokutya
Oda ingxelo yokuhanjiswa kokutya
Uphuhliso lweshishini lokutya kunye neenkampani zokuhanjiswa kwamanzi zisekelwe ekusebenzeni kakuhle kunye nokuzenzekelayo kuzo zonke iinkqubo zokusebenza. Iinkonzo ze-Courier kufuneka zicwangcise imisebenzi yazo ukuze zisebenze ngokucacileyo kwaye zilungelelaniswe kakuhle kunye nokomelezwa kweenzuzo zokukhuphisana kwimarike. Isantya esiphezulu sokuhanjiswa kokutya kunye namanzi, kokukhona uphononongo oluhle ngakumbi kunye nolandelelo oluya kufunyanwa yinkampani. Ke ngoko, ukubalwa kwengxelo yokuhanjiswa kokutya kufuna ukusetyenziswa kwesoftware eya kwandisa ukusebenza kakuhle kokusetyenzwa kunye nokuphunyezwa kwemiyalelo kwaye, ngokufanelekileyo, isixa senzuzo. Isisombululo esona sisisombululo kule ngxaki siya kuba kukuthengwa kwenkqubo ye-Universal Accounting System, ephuhliswe ngokuhambelana neenkcukacha zeenkqubo zeenkampani ze-courier. Isoftware esiyinikezelayo inokubuyisela ngokulula ezinye izicelo kwaye ikuvumela ukuba ulungelelanise zonke iindawo zomsebenzi ngeyona ndlela isebenzayo. Abasebenzi benkonzo yakho yonikezelo abayi kukwazi ukwenza iiodolo kuphela kwaye babeke iliso ekusebenzeni kwabo, kodwa nokugcina abasebenzi kunye neerekhodi ze-accounting, ukuvelisa amaxwebhu, ukuhlaziya i-database, ukuzoba iingxelo zohlalutyo kunye nokunye okuninzi.
Ulwakhiwo lwesoftware ye-USU yahlulahlulwe yaba ziibhloko ezintathu zesisombululo esilandelelanayo senani elithile lemisebenzi. Icandelo leeReferensi liyimfuneko ukwenza i-universal information resource: abasebenzisi beprogram bafaka uluhlu lweenkonzo, iindlela, izinto ze-accounting, iimpahla kunye nezinto eziphathekayo, ulwazi malunga namasebe kunye nabasebenzi. Ukuguquguquka kwezicwangciso zenkqubo kukuvumela ukuba usebenze nazo naziphi na iindidi zokutya kunye namanzi, ngoko unako ukwandisa uluhlu lwakho lwe-assortment rhoqo. Ukongezelela, njengoko idatha ihlaziywa, abasebenzi bakho baya kukwazi ukuhlaziya iziqinisekiso, ngoko unokugcina umkhondo wokuhanjiswa kwamanzi, izinto ezinxulumene nazo kunye naziphi na iimpahla. Kwicandelo leModyuli, zonke iinkalo zomsebenzi zilawulwa: apha ubhalisa imiyalelo yokuhanjiswa, unqume zonke iiparitha eziyimfuneko, ubale iindleko kwaye uvelise amaxabiso kwimodi ezenzekelayo. Abasebenzisi bangafaka ngesandla nayiphi na into njengento yokuhanjiswa. Emva kokucutshungulwa kwedatha, inkqubo ivelisa iifom zeerisithi kunye namaphepha okuhambisa kunye nomsebenzi wokuzalisa ngokuzenzekelayo amasimi ukuba akhuphe kwii-couriers. Ukuhanjiswa kweodolo yokutya nganye kulandelwa kusetyenziswa isimo kunye nokumakishwa kombala othile, okwenza lula kakhulu inkqubo yokubeka iliso kwiinkonzo ezininzi ezenziwa ngaxeshanye. Inkqubo irekhoda inyaniso yokufumana intlawulo yokutya okuhanjisiweyo kunye namanzi ukuze kulawulwe ukufunyanwa kweemali kwimiqulu ebaliweyo. Icandelo leeNgxelo liyafuneka ukuhlalutya iziphumo zezimali zenkonzo yekhuriya. Unako, ngaphandle kwenkcitho ebalulekileyo yexesha lokusebenza, ukukhuphela iingxelo zemali kunye nolawulo lwalo naliphi na ixesha elinikeziweyo ukuze uhlalutye ukuguquka kunye nolwakhiwo lwezikhombisi zemisebenzi yemali kunye nezoqoqosho yenkampani: ingeniso, iindleko, inzuzo kunye nenzuzo. Ulwazi olunomdla luya kuboniswa ngokucacileyo kwimizobo, iigrafu kunye neetafile ezicwangcisiweyo, kwaye ngenxa ye-automation yokubala, awuyi kuba nokuthandabuza ukuchaneka kwedatha esetyenziselwa ukuvavanya imeko yemali yombutho.
Ukongeza, inkqubo yokubala yokuhanjiswa kokutya ephuhliswe sithi inomsebenzi wokwenza uphicotho lwabasebenzi, ukuphuhlisa ubudlelwane nabathengi, kunye nokwenza imisebenzi yendawo yokugcina impahla. Ke, isoftware ye-USU inceda ukwandisa iinkqubo ezahlukeneyo ukomeleza ngokufanelekileyo isikhundla kwimarike ekhuphisanayo yeenkonzo zekhuriya!
Inkqubo ye-USU inikezela ngeenkonzo ezifanelekileyo njengokwazisa abathengi malunga nobume bomyalelo, kunye nokuthumela izaziso malunga nezaphulelo kunye nezinye iziganeko.
Unokujonga umsebenzi wokuzaliswa kwesiseko somthengi, kunye nokujonga izizathu zokwaliwa kweenkonzo ezinikezelwayo.
Ukusebenzisana nenkqubo yethu yekhompyutha, uya kukwazi ukugcina iirekhodi zeenkonzo zekhuriya, kubandakanywa nabathengi abakhulu - umzekelo, ukuhanjiswa kwamanzi kwiiofisi kunye namaziko oshishino.
Abasebenzisi banokusebenza ngeefayile ezahlukeneyo, ulwazi lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kwi-MS Excel kunye ne-MS Word formats, ukuseta naziphi na izicwangciso zentlawulo.
Abasebenzi bakho baya kuba nethuba lokwenza ngokukhawuleza amaxwebhu ayimfuneko kunye nokuprintwa kwabo okulandelayo kwileta esemthethweni yenkampani kunye nokusetha okuzenzekelayo kwezinto ezifunekayo.
Ukuba kuyimfuneko, unokukhuphela ingxelo kuzo zonke iimpahla ezihanjisiweyo kumxholo weekhuriya ukwenzela ukuvavanya ukusebenza kunye nesantya sabasebenzi.
Ukucwangciswa kwesoftware kunokwenziwa ngokwezifiso ngokweempawu kunye neemfuno zombutho wakho othile, ukubonelela ngezisombululo zomntu kwiingxaki ezikhoyo.
Ulawulo lwenkampani luya kuba nokufikelela ekulawuleni ukusebenza kwabasebenzi bemisebenzi yabo kunye nokuhlalutya impumelelo yokusombulula imisebenzi eyabelwe ukulawula umgangatho weenkonzo kunye nokuphuhlisa imilinganiselo yokukhuthaza kunye nokuvuza abasebenzi.
Ukuze kuphunyezwe izicwangciso zokuthengisa, uya kunikwa ithuba lokuvavanya ukusebenza kweentlobo ezahlukeneyo zentengiso malunga nokutsala abathengi.
Unokuthelekisa inani leefowuni ezifunyenweyo, izikhumbuzo ezenziweyo kunye nobungakanani bomsebenzi ogqityiweyo ukuqikelela ukubakho kunye nesabelo semarike esikhoyo.
Uhlalutyo lweendleko kunye novavanyo lokuba nokwenzeka kwazo luya kuchonga kwaye lungabandakanyi iindleko ezingafanelekanga kwaye ngaloo ndlela lwandise ubume beendleko.
Uvavanyo lwamandla okuthenga abathengi lunokukunceda uvelise iikowuti zexabiso ezinomtsalane kubathengi bakho kwaye uphucule inzuzo yakho yokukhuphisana.
Ukubonakaliswa okubonakalayo kwedatha kulwakhiwo kunye nokutshintsha kwezalathi zezemali kunegalelo kulawulo olusebenzayo lobalo kunye nolawulo lokuthotyelwa kwemilinganiselo eyiyo kunye nezo zicwangcisiweyo.
Ulawulo lwenkampani aluyi kuba nokufikelela kuphela kulawulo lokuphunyezwa kwezicwangciso zoshishino, kodwa kunye nokuxela kwangaphambili imeko yemali yenkampani kwixesha elizayo.
Ukuba kuyimfuneko, inkxaso yobugcisa yeengcali zethu inokwenzeka, iqhutywe kude.